NguYona 2 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
1 UYona wathandaza kuYehova uThixouThixo wakhe embilinini wentlanzi, wathi, Ndakhala kuYehova ndisembandezelweni, Wandiphendula;
2 Ndazibika ndisesiswini selabafileyo, Waliva wena ilizwiilizwi lam.
3 Ngokuba wawundiphosa enzulwini, embilinini yeelwandle, UmlamboUmlambo waba ngeenxa zonkengeenxa zonke kum; Adlula phezu kwam onke amaza akho alwayo, namaza akho agugumayo.
5 Andirhawula amanziamanzi, ada eza emphefumlweni; Andijikeleza amanziamanzi enzonzobila; Ingca yolwandle yayithi jize intlokointloko yam.
6 Ndehla ndaya ezikhondweni zeentaba; Lona ihlabathi, imivaloimivalo yalo yandivalela ngonaphakadengonaphakade; Wasuka wabunyusa emhadini ubomiubomi bam, YehovaYehova Thixo wam.
8 Abagcine amampungeamampunge angento yanto Bashiya inceba yabo
9 Ke mna ndiya kubingelela kuwe ndinezwi lokubulela: Endakubhambathisayo ndiya kukuzalisa. UsindisoUsindiso lukuYehova.
Exploring the Meaning of NguYona 2
1 Samuweli 12:21
1 Kumkani 17:4
2 yeziKronike 33:12
IiNdumiso 5:8, 22:26, 42:8, 69:2, 14, 88:6, 7, 116:1, 2, 120:1, 142:4
UIsaya 38:17, 20, 43:11
IZililo 3:54, 55
UHoseya 13:4, 14:3
Izenzo zaBapostile 14:15